Condition Qaboojiyaha biyaha aquarium -ka ugu fiican | Ee kalluunka
Qaboojiyaha biyaha waa shay aad loogu baahan yahay si loo nadiifiyo biyaha toos uga yimaada tubbada. oo ka dhig mid ku habboon si kalluunkaagu ugu dhex noolaado adigoon ka cabsanayn koloriin iyo walxo kale oo ku jira biyaha qasabadda oo caafimaadka wax u dhimaya.
Maqaalkan waxaan ka hadli doonaa alaabta qaboojiyaha biyaha ugu fiican, marka lagu daro inay kuu sheegaan waxa qaboojiyaha loogu talagalay, marka ay lama huraan tahay in la isticmaalo iyo sida loo isticmaalo. Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee ku saabsan waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka si aad u noqoto khabiir run ah.
1 Qaboojiyaha Biyaha ee Aquarium -ka ugu Fiican
2 Waa maxay qaboojiyaha biyaha quraaradda iyo maxaa loogu talagalay?
3 Qaboojiyaha Biyaha ee Aquarium -ka ugu Fiican
3.1 Qaboojiyaha biyaha oo aad u dhameystiran
3.2 Tetra Aqua Safe ee biyaha qasabadda
3.3 Conditioner leh adeegsiyo badan
3.4 Nadiifiyaha Biyaha -macaan
3.5 Qaboojiye Nolol Fudud
4 Goorma ayay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo qaboojiyeyaasha biyaha quraaradda?
5 Sida loo isticmaalo qaboojiyaha biyaha quraaradda
6 Xagee laga iibsadaa qaboojiye biyo -biyood oo jaban
Qaboojiyaha Biyaha ee Aquarium -ka ugu Fiican
JBL Biotopol -...
Seachem Timaha hagaajiye ...
Waa maxay qaboojiyaha biyaha quraaradda iyo maxaa loogu talagalay?
Qaboojiyaha biyaha, sida magacu tilmaamayo, waa a badeecad u oggolaanaysa daaweynta biyaha tuubada, oo caadiyan waxyeello u keeni karta kalluunka, oo shuruud uga dhiga inay u beddesho deegaan ay ku noolaan karaan.
Markaa, markaa, qaboojiyaha biyaha waa qasacado ay ka buuxaan dareere, markii lagu tuuro biyaha (had iyo jeer raac tilmaamaha sheyga, dabcan) ayaa mas'uul ka ah baabi'inta walxahaas, sida koloriin ama chloramine, kuwaas oo waxyeello u leh kalluunkaaga.
Suuqa waxaad ka heli doontaa qaboojiyeyaal badan oo biyo ah, in kasta oo aanay isku tayo ahayn ama isku fal ahayn, sidaa darteed waxaa si gaar ah muhiim u ah inaad doorato badeecad leh tayada ugu sareysa (ka dib oo dhan waxaan ka hadlaynaa caafimaadka kalluunkaaga). Waxaan kuu diyaarinay xulasho sida ugu fiican:
Qaboojiyaha biyaha oo aad u dhameystiran
Seachem waa astaan ​​aad u wanaagsan oo leh mid ka mid ah qaboojiyeyaasha biyaha ee ugu dhameystiran suuqa. Ma laha wax ka badan oo aan ka yarayn afar cabbir oo aad dooran karto iyada oo ku xidhan xaddiga biyaha ee ku jira quraaradda (50 ml, 100 ml, 250 ml iyo 2 l), in kasta oo ay aad u faafto, maadaama ay tahay inaad isticmaasho 5 ml (hal dabool) oo badeecad ah 200 litir kasta oo biyo ah. Seachem Conditioner wuxuu ka saaraa koloriin iyo chloramine wuxuuna sumoobaa ammonia, nitrite iyo nitrate. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa qiyaaso kala duwan, sida ku cad tilmaamaha sheyga, si aad ula qabsato dhibaatada biyaha. Tusaale ahaan, haddii ay leedahay xaddi aad u sarreeya oo chloramine ah, waxaad isticmaali kartaa qiyaas laba -laab ah, halka haddii ay aad u hooseyso, qiyaas nus ah ayaa ku filnaan doonta (waxaan ku adkeysaneynaa inaad fiiriso tilmaamaha alaabta ka hor intaadan waxba sameyn).
Tetra Aqua Safe ee biyaha qasabadda
Badeecadani waa mid wax ku ool ah, tan iyo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad biyaha qasabadda u rogto biyo ammaan ah kalluunkaaga. Hawlgalku wuxuu la mid yahay badeecooyinka kale ee noocan ah, maadaama ay ka kooban tahay oo keliya in alaabta lagu shubo biyaha (goor dambe, qayb kale, waxaan ku tusi doonaa tallaabo tallaabo sida loo sameeyo). In kasta oo aysan u baahnayn sida Seachem, maaddaama saamigu yahay 5 ml halkii 10 litir oo biyo ah, waxay leedahay qaacido aad u xiiso badan oo ilaalinaysa xuubka iyo xuubka xuubka kalluunkaaga. Intaa waxaa dheer, waxaa ka mid ah isku -dar ah fiitamiinno kaa caawiya yareynta buufiska xayawaankaaga.
Conditioner leh adeegsiyo badan
Qaboojiyaha Timaha Dheecaanka ...
Qaboojiyaha qaarkood, sida kan ka yimid Fluval, looma qorshayn oo keliya in la hagaajiyo biyaha inta lagu jiro isbeddelka biyaha, laakiin sidoo kale sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inay la qabsadaan kalluunka hadda soo galay quraaradda, si loogu beddelo biyaha qayb ahaan ama in kalluunka loo raro quraaradda kale. Way fududahay in la isticmaalo sida moodooyinka kale, waxay ka saartaa koloriin iyo chloramine, waxay dhexdhexaadisaa biraha culus ee laga yaabo inay ku jiraan biyaha waxayna ilaaliyaan baalalka kalluunka. Intaa waxaa dheer, qaaciddeeda waxaa ka mid ah isku dar ah geedo dajin oo kaa caawiya yareynta walaaca.
Nadiifiyaha Biyaha -macaan
Waxaa ka mid ah kuwa wax sifeeya ama hagaajiyayaasha biyo -biyoodka biyaha macaan waxaan ka helnaa badeecadan wanaagsan, Biotopol, oo leh saamiga 10 ml ee badeecada 40 litir oo biyo ah ayaa mas'uul ka ah ka saarida koloriin, chloramine, copper, lead iyo zinc. Waxaad u adeegsan kartaa labadaba isbeddelada biyaha oo dhammaystiran iyo qayb ahaan, marka lagu daro, waxay u adeegtaa sidii loo hagaajin lahaa difaaca kalluunka ee hadda uun ka bogsaday cudur, maadaama ay ku jirto, sida badeecadaha kale, isku -dar ah fiitamiinno oo sidoo kale ka caawiya yareynta walaaca.
Biyahan sifeeya waxay ku timaadaa dhalooyin nus litir ah waxaana loo isticmaali karaa aquariums -ka ay ku nool yihiin kalluunka biyaha macaan iyo qoolleydu.
Qaboojiye Nolol Fudud
Nolol-fudud AQM0250 ...
Hawo -qaboojiyahaan fudud ee biyaha ah, oo lagu heli karo dhalo 250 ml ah, wuxuu sameeyaa wixii uu ballanqaaday: wuxuu hagaajiyaa biyaha qasabadda wuxuuna u diyaariyaa kalluunkaaga isagoo ka saaraya koloriin, chloramine iyo ammonia. Hawlgalkeedu waa mid fudud sida kuwa kale, maadaama ay tahay inaad ku darto kaliya xaddiga la tilmaamay ee badeecada litirkii la tilmaamay ee biyaha. Waxaad u isticmaali kartaa labadaba isbeddelka biyaha ee ugu horreeya iyo qeybaha kala duwan, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa meelaha biyo -biyoodka ah ee ay qoolleydu ku nooshahay.
Goorma ayay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo qaboojiyeyaasha biyaha quraaradda?
In kasta oo biyaha tuubadu caadi ahaan ammaan u yihiin bini -aadamku inay cabbaan (in kasta oo aysan had iyo jeer ahayn ama meel walba), tirada alaabta aan ammaan ahayn ee kalluunka waa mid aan dhammaad lahayn. Laga soo bilaabo koloriin, chloramines ilaa xitaa biraha culus sida leedhka ama zinc, biyaha qasabadu maahan deegaan nabdoon kalluunkeenna. Sidaa darteed, had iyo jeer ka fakar fayoobaantaada, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qaboojiye biyo laga bilaabo daqiiqada ugu horeysa.
Qaboojiyaha biyaha ayaa u oggolaanaya inay sidaas noqoto. Tusaale ahaan, waxay uga tagaan biyaha tubbada sidii shiraac bannaan oo kalluunkaagu si ammaan ah ugu noolaan karo. Markaa, waxaad xitaa adeegsan kartaa badeecooyin kale oo bayooloji ahaan hagaagaya (tusaale ahaan, waxay sababaan bakteeriyada "wanaagsan" inay sii bataan) biyaha ku jira quraaraddaada sidaasna kor loogu qaado tayada nolosha kalluunkaaga iyo dhirtaada.
Ugu dambeyntii, waxaa kale oo muhiim ah inaadan ku xadidin isticmaalka qaboojiyaha isbeddelka biyaha ee ugu horreeya. Raac tilmaamaha ku jira badeecada, oo kuu sheegi doona sida loo isticmaalo, badiyaa leh qiyaaso hoose, isbeddel biyo qayb ahaan ah, ama xitaa xaalladda kalluunka imminka yimid, hagaajiya hab -dhiska difaaca jirrada kadib ama dhimista walaaca.
Sida loo isticmaalo qaboojiyaha biyaha quraaradda
Hawlgalka qaboojinta biyaha loogu talagalay quraaradda ma noqon karto mid fudud, si kastaba ha ahaatee, sida caadiga ah waxay keentaa shaki yar oo aan iska nadiifin doonno.
Marka hore, qaboojiyaha wuxuu u shaqeeyaa si fudud isagoo ku daraya biyaha quraaradda, ama isbeddelka biyaha ama qayb ahaan isbeddel (tusaale ahaan, ka dib marka aad hoos u foorarsato).
Mid ka mid ah shakiga ugu badan ayaa ah in qaboojiye lagu dari karo inta kalluunku ku jiro quraaradda. Jawaabtu waxay tahay, iyada oo leh qaboojiyeyaasha ugu fiican, waa la samayn karaa, maxaa yeelay waxay ku faafaan biyaha daqiiqad gudaheed. Si kastaba ha noqotee, kuwa kale waxay u dhaqmaan si tartiib tartiib ah, sidaa darteed way fiicantahay, si loo hubiyo in wax walba si fiican u socdaan, taasi u dhig kalluunkaaga weel gooni ah adiga oo ku daraya qaboojiye biyaha.
Waxaad ku celin kartaa kalluunkaaga biyaha shan iyo toban daqiiqo gudahood.
Guud ahaan, qaboojiyaha biyaha ayaa ammaan u ah kalluunkaaga, laakiin waxay noqon karaan kuwo dilaa ah haddii aadan ku dheganayn tilmaamaha badeecada. Sababtoo ah, waxaa lama huraan ah inaad ku dhegto tilmaamaha oo aadan ku darin qiyaaso hagaajiye.
Ugu dambeyntii, biyo -mareennada cusub, xitaa haddii aad biyaha ku daaweyso qaboojiyaha waa inaad sugtaa bil si aad ugu darto kalluunkaaga. Tani waa sababta oo ah dhammaan aquariums -yada cusub waa inay maraan geeddi -socodka baaskiilka ka hor inta aan la dejin kalluunka.
Xagee laga iibsadaa qaboojiye biyo -biyood oo jaban
Waad heli kartaa qaboojiyeyaasha biyaha meelo badan, gaar ahaan dukaamada khaaska ah. Tusaale ahaan:
En Amazon Kaliya ma heli doontid qaboojiyeyaal tayo sare leh, laakiin sidoo kale qiimayaal aad u kala duwan iyo shaqooyin kala duwan (qaboojiye saafi ah oo adag, ka hortagga walbahaarka…). Waxa ugu fiican ee ku saabsan dukaankan weyn ayaa ah, haddii aad qandaraas la gashay ikhtiyaarka Prime, waxaad ku haysan doontaa guriga daqiiqad gudaheed. Intaa waxaa dheer, waxaa kugu hagi kara faallooyinka si aad u ogaato midka kugu habboon.
En dukaamada xayawaanka ee gaarka ahSida Kiwoko ama Tíanimal, waxaad sidoo kale heli doontaa tiro badan oo qaboojiyeyaal. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin qaabab jireed, sidaa darteed waad tagi kartaa shaqsi ahaan waxaadna weydiin kartaa su'aalaha suurtagalka ah ee soo bixi kara.
In kasta oo, shaki la'aan, kan leh qiimaha aan la jabin karin ayaa ah Silsiladda dukaanka weyn ee Mercadona iyo dawadeeda Dr. Wu qasabadda biyaha, oo ka timid astaanta Tetra. In kasta oo, baaxaddiisa awgeed, waxaa lagula talinayaa haamaha yaryar iyo taangiyada kalluunka, looma jeedo kuwa hiwaayadda ah oo hore u haystay taangi cabbirka harada Lake Titicaca, oo sumcadaha iyo qaababka kaleba aad loogu taliyo.
Qaboojiyaha biyaha quraaradda waa aasaas u oggolaanaya in biyuhu u noqdaan bey'ad ammaan ah kalluunkayaga. Noo sheeg, daaweyn noocee ah ayaad u isticmaashaa biyaha? Ma jiraa astaan ​​gaar ah oo aad jeceshahay ama aadan weli isku dayin inaad isticmaasho qaboojiye?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Qaboojiyaha biyaha Aquarium